Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in hoggaamiye katirsan Al-Shabaab ay ku dileen gudaha gobolka Shabeellaha Hoose - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowladda Soomaaliya oo sheegtay in hoggaamiye katirsan Al-Shabaab ay ku dileen gudaha gobolka Shabeellaha Hoose
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in hoggaamiye katirsan Al-Shabaab ay ku dileen gudaha gobolka Shabeellaha Hoose
May 7, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Wasiirka Warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo wariyeyaal kula hadlaya gudaha Muqisho. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka Warfaafinta dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa bayaan ku sheegay in ciidamadoodu ay hoggaamiye katirsan Al-Shabaab oo la dhaho Macalin Cusmaan Cabdi Baadil, iyo saddex dagaalyahan oo kale ay ku dileen gudaha gobolka Shabeellaha Hoose Jimcadii lasoo dhaafay.
“5-tii May, ciidamada qaranka Soomaaliya waxay dileen hoggaamiye Al-Shabaab ah oo la dhaho Macalin Cusmaan Cabdi Baadil, iyo saddex dagaalyahan oo kale,” ayuu bayaanka ku yiri Wasiirka Warfaafintu.
“Tani waxay wiiqaysaa awooda argagixisada ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waana guul u soo hoyatay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa nabad ilaalinta.” Ayuu ku daray.
Ma jirto ilaa iyo hadda jawaab ka timid maleeshiyada oo ku saabsan sheegashada dowladda.
Ururka hubaysan ee Al-Shabaab ayaa muddo sanado ah dagaalamayay, waxayna doonayaan in ay meesha ka saaraan dowladda uu caalamku taageersanyahay ee fadhigeedu yahay Muqdisho.
Somali government says it has killed Al-Shabab commander in Lower Shabelle region
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Axad ah si rasmi ah xariga uga jaray waddo laami ah oo isku xiraysa magaalada Garoowe iyo xarumaha dowladda ee kuyaala duleedka magaalada. Iasaga oo [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in Puntland ay iyadu u madaxbanaan tahay khayraadka dabiiciga ah ee ku jir dhulkeeda. “Sida datuurka federaalka Soomaaliya iyo kan Puntland ay qorayaan dhulkeeda khayraadka ku [...]